Ngwongwo ndi mmadu na ihe ndi ozo maka imegide nsogbu
A maara ike nke anwansị nke nkwonkwo nke ndị ọkachamara n'oge ochie na ndị na-agwọ ọrịa na China. Ugbua puku afọ atọ gara aga, mgbe enweghị microscopes ma ọ bụ ngwá ọrụ pụrụ iche, ndị ọkà mmụta sayensị China maara na n'ụwa anyị, e nwere obere obere ihe ndị e kere eke, na okwu ndị ọzọ, ụmụ nje, nje na nje bacteria. Iji guzogide nje, ahụ mmadụ ga-enwe nguzo siri ike, na okwu ndị ọzọ, njigide. Ndị na-agwọ ọrịa Chinese maara na ọ bụ nanị site n'enyemaka nke ahụ ike anyị nwere ike ịlanahụ ọnọdụ ọjọọ nke ụwa gbara gburugburu. Nanị nsogbu siri ike nwere ike iguzogide ọtụtụ nde nje na nje bacteria na-efegharị n'elu. Na, ọ bụ na oge ochie China, a maara nke ọma maka ndị mmadụ na usoro ọgwụgwọ iji gbochie nsogbu.
Dị ka o kwesịrị ịdị, mmegide dị n'ime ahụ anyị ọ bụghị nanị iji merie ọgụ "site na mpụga", kamakwa ịlụ ọgụ maka nsogbu nke ụlọ. Dị ka, ọrịa metabolic, allergies, malignancies na ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'ụzọ, banyere usoro ihe ojoo. Ị ma otú ha si apụta? Site na okike, usoro ntinye anyi nwere ihe onwunwe di iche iche nke a: o nwere ike wepu aru anyi ihe obula na adighi mkpa, ihe nile di iche. Ugbu a, chee echiche nke abụọ, ole ole anyị na-etinye n'ime ahụ anyị kwa ụbọchị? Nke a na-agụnye mmanya na-aba n'anya, na sịga, na ngwaahịa ndị na-adịghị mma, na nri na-ezighị ezi. Echefula banyere ọnọdụ obibi na-adịghị mma nke dị n'obodo anyị, ọbụnakwa n'obodo nta. N'ụzọ dị mwute, a na-amanye anyị ibi n'obodo ukwu, kwa ụbọchị gaa ọrụ, nọrọ ọtụtụ awa n'ebe ahụ, nwee ụjọ na nchegbu, banye na esemokwu ma chọpụta mmekọrịta na ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nduzi. N'ụlọ, anyị na-echerekwa site na nsogbu, nsogbu na nrụgide ndị a ghaghị ime. Ihe a niile na-emetụta ọnọdụ nke nnwere onwe anyị.
Ya mere, olee otu ị ga - esi kwado nnwere onwe gị n'ọnọdụ ndị dị otú a? Cheta na ebumnuche anyị ji eme ihe n'usoro n'ụzọ dị otú a na ọ dị mkpa ka anyị "tụfuo ihe ọ bụla na-adịghị mkpa" site na ahụ anyị, ma ọ gaghị agbada. N'ime oge ndụ nke oge a, n'ụzọ ndụ anyị, nnwere onwe nanị na - enwe ike ịmepụta "ihe ọjọọ" na igbochi ha ịgbasa n'ime ahụ anyị, mana, iji mee ya - nke a adịkwaghị ike. Eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla na-egbochi onye ọ bụla adịghị ike maara ihe niile. Ọ bụ site na "ebe ndị a na-edebe ihe mkpofu" nke na-apụta n'ime ahụ anyị nke a na-achọghị ịchọrọ, na okwu ndị ọzọ, ụbụrụ na-abaghị uru ma ọ bụ ajọ njọ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ezigbo ndị na-eto eto nwere ọrịa na-ekpuchi ọrịa. Ọtụtụ mgbe, ụmụ nwanyị na-adaba n'ụdị a, na nwata nke oge ọmụmụ ha, ha nwere ike ịmalite ịrịa kansa, ọ bụ ezie na ha nọ n'oge ahụ mgbe ha bi ma na-amụ ma mụọ ụmụ.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume izute onye dị ezigbo mma na oge anyị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ahụike dịtụ njọ, mgbe ahụ, a naghị ahụkarị mwakpo kwa ụbọchị na nje na nje bacteria na ahụ anyị, n'ihi ọrụ nkịtị nke usoro ọgwụgwọ anyị. O doro anya ma chọpụta ngwa ngwa ụmụ nje ndị dị ize ndụ, wepụ ha ma wepụ ha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọrịa ahụ adịghị ike, ọbụna obere ọrịa nwere ike ịkpata mmepe nke ọrịa na-adịghị ala ala nke na-eme n'ụdị buru ibu. Na ihe nile n'ihi na ọgwụ ọjọọ ndị a na-eji na-agwọ anyị na mgbọrọgwụ na-egbu na-ebibi usoro ọgwụgwọ anyị. Ka ọ dị ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla n'ime anyị nwere nke a ma ọ bụ na-emeghasị ọrụ nke nsogbu. Nke a nwere ike ịkpata ihe kpatara nsogbu nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ma ọ bụ pụta n'ihi ndụ na-ezighị ezi, nri na-ezighi ezi. Otú ọ dị, ọ bụrụgodị na nwata ụlọ akwụkwọ na-eto eto nwere ike ịghọta na n'oge anyị, anyị na-eme ihe abụọ na-akpata nkwarụ na-adịghị ike. Ọ dị mkpa ịlụ ọgụ ya na usoro dum. Ya mere, olee ihe ndị mmadụ na-eme maka ọgwụ mgbochi?
Ọ bụ ihe nwute na nsogbu dị otú a na-eto eto na ndị na-eto eto, ndị nọ n'afọ iri na ụma na ụmụntakịrị, n'ihi na a mụrụ ha na nsogbu na usoro ahụike. Na ihe nile n'ihi na mgbe ha dị ime, ha enwetaghị ihe oriri zuru ezu, ihe dị mkpa, ma, kama nke ahụ, ha nwetara ihe ọjọọ na ihe na-emerụ ahụ site na nne ha. A na-amụ ụmụ ọhụrụ na gburugburu ebe obibi dị egwu, nke ha na-enwetaghị nchebe dị mkpa maka nsogbu. Ọfọn, ọ bụrụ na nne na nna nke nwatakịrị ahụ maara nke ọma ma mara otú e si azụ nwatakịrị, otu esi azụ ya, ịzụlite ma wusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Ọtụtụ mgbe karịa, ọnọdụ ahụ agbanyela, ndị nne na nna, ịzụlite nwatakịrị, na-eju anya na nwatakịrị ahụ na-arịa ọrịa, n'ihi na ọ nwere ihe niile ọ chọrọ.
Tụkwasị na nke ahụ, nsogbu ahụ na-eme ka ike gwụ site na mmetụta nke ihe ndị a kọwara n'elu, ihe ndị dị ka ọgwụ ndị ụlọ, radieshon, radiation electromagnetic, nkwupụta ụda, na-eme ka ọ ghara ịda mbà. Ihe ndị a nwekwara mmetụta na - adịghị mma na usoro nchịkwa anyị. Ọtụtụ ọgwụgwọ nke oge a bụ ndị na-achọ ịba ụba nkwarụ, ọ dị mwute ikwu, enweghị ike nke ahụ anyị kwesịrị iweghachi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Ejila onwe gị ọgwụ, na-emefu ego na ịzụta nke ngwaahịa mgbasa ozi, nke, kwuru, e mere iji mụbaa anyị ọgụ. Ghọta na ahihia ahihia nwere ntakiri ihe ndi nwere uru. Ọ bụrụ na ị maara n'ezie na usoro ntinye aka gị dị na steeti, ị nwere ike ime nchọpụta pụrụ iche - immunogram. Ọ bụ nchọpụta siri ike dị mgbagwoju anya, nke e mere iji chọpụta ọnọdụ gị na mgbochi gị. Usoro nke ịchọta ọnọdụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-eme site na ịgụta ọnụ ọgụgụ nke sel na-adịghịzi ahụ n'ahụ gị. Na Europe, a naghị emecha ọmụmụ dị otú ahụ, a na-eduzi ha naanị mgbe a họpụtara dọkịta. Na Russia, ọtụtụ ụlọ ọgwụ na-enye usoro a, mana ọ naghị eburu uru bara uru.
Ya mere, ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na nkwarụ gị adịghị ike, ọ bụrụ na ọrịa ọ bụla na-eme ka ị daa, mgbe ahụ ọ bụ oge iji nweta nsogbu. Kedu ihe ị ga-amalite? Kedu ihe ndị mmadụ na-eme iji nweta ọgwụ mgbochi? Iji malite ya dị mkpa ịgbanwe nri. Ahụ anyị bụ ma nata ihe anyị na-enye ya. Ọ bụ ngwaahịa ha na-eri, mkpụrụ ndụ anyị na-enweta ihe oriri ma na-enweta ike, n'ihi ya, ọ bara uru gụnyere protein zuru oke, abụba anụmanụ na ihe oriri, amino acids na nri gị. Enweghị ihe ndị a, a gaghị ekwe ka njikọ nke immunoglobulins na ahụ anyị. Ọ bụrụ na ahụ adịghị enweta nri kwesịrị ekwesị maka nri ndị dị mkpa maka iwu nke immunoglobulins na-arụsi ọrụ ike, mgbe ahụ, nsogbu anyị na-ebelata. Maka ọrụ nkịtị nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, anyị ga-enwerịrị ike ịnweta ya na abụba bara uru, cholesterol bara uru, nke na-ekere òkè na iji macrophages na lymphocytes.
Ya mere, ndi mmadu na ihe ndi ozo maka igbalite mmeri bu: anumanu na akwukwo nri, anumanu, nri anu. Echela na ị na-eri oge na-eri nri, ihe na-esi na ya apụtaghị na ọ ga-efu gị, kama ọ na-eme ka ahụ na ahụ ike ghara ịdị. O juru anya, mana isi kachasị mma maka ahụ anyị bụ abụba. N'ezie, ha ekwesịghị ịmegbu onwe ha, ma mgbe ụfọdụ ị nwere ike iri mkpụrụ ego abụọ. Ọ nwere ihe pụrụ iche nke arachidonic acid, nke bara ezigbo uru maka nsogbu anyị, maka iwu nke immunoglobulins. Nye ohere maka vitamin gị, nke dị na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi. Họrọ nri na mkpụrụ osisi na-egbuke egbuke. Ha ga-enyere aka n'ịgbalite nsogbu. Nwere antioxidants na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ, na-ekwe ka mwepụ nke mgbatị na-enweghị n'efu, nke na-emetụta ezigbo ahụike anyị. N'ihi ha anyị na-aka nká, ndụ anyị dị mkpụmkpụ, anyị na-efunahụ ike. Nakwa iji nọgide na-alụ ọgụ na ọ dị mkpa igwu egwuregwu, na-ebi ndụ ndụ, na-ezuru ike, zuru ike ma nwee mmetụta dị mma, mgbe ahụ ị ga - enwe nsogbu. Ọ dịghị ọrịa agaghị adị egwu maka gị.
Njirimara ọgwụ na nke anwansi nke almandine
Kedu ka ị ga-esi ghara ibu ibu, ọ bụghị ịla n'iyi na ịma mma: chọpụta ihe nzuzo 3 nke Aishwarya Rai!
Ahụ ike ụmụ nwanyị na ịma mma
Ghọta ihe mgbu nke ahụ
Ọrịa na ịgwọ ọrịa nke varicose veins
Ọkpụkpụ Varicose na ụkwụ, ọgwụgwọ n'ụlọ
Esi mee ka ara gị zuo oke: Bra, peeling, vitamin
Ụzọ nke omenala na nkà mmụta ọgwụ maka ọgwụgwọ nke akụrụ cysts
Ugbo ụgbọ mmiri a na-amị mkpụrụ
Otu esi merie nwoke, ọdụm n'elu ihe omume
Casserole na spinach casserole
Ụdị ígwè dị n'ọbara nwa
Pasta na-acha anụnụ anụnụ chiri
Ihe omuma banyere onu
Usoro: uru na ngwa
Cupcake banana na walnuts
Nri ugu na apụl na mịrị
Nleta nke oge a iji kọwaa nrọ ahụ
Ọ bụrụ na nyocha nke "candidiasis" ị tinyere n'oge ime
Osisi kọfị nke ụlọ ụlọ
Egwuregwu na ụmụaka na ọdịdị